U-Alexandra Revva wayecatshulwa ngokusuka ngamaqhawe, ividiyo
I-Chip Iggy Poppa inqabileyo ayinikeli ukuphumla kubaculi abaninzi kwiminyaka emininzi. Ukuxhuma ukusuka kwinqanaba ukuya kwisihlwele sidonsa iinkwenkwezi - kubonakala ngathi ezandleni zamalandeli unako ukuwela yonke iholo, njengokungathi kunamagagasi olwandle olwandle. Enyanisweni, ukuzama ukuxhuma kwisihlwele ukusuka kwisiteji akuzange kuphumelele. Omnye wawela ngqo phantsi, kwaye umntu wayeseqhekeza ngokukhawuleza ezandleni zabalandeli abathembekileyo.
UAlexandre Revva, kuvela, kudala kakhulu kulindeleke iphupha eliyinqwenela. U-Kvnshchik, u-humorist, umhlali waseKamedi, umculi, umculi kunye nomlingo okhangeleleneyo ... Kukho izihloko ezaneleyo zokufumana umgangatho wokuphumelela.
Kwakudala ixabiso lakhe, uAlexander, de, ekugqibeleni, yabonakala phambi kwabaphulaphuli baseKaluga. Abaphulaphuli bathatha u-Arthur Pirozhkov ngokufudumele kangangokuba wacinga ...
UAlexander Revva ubala umonakalo ukusuka kwinqwelo eKaluga
Kanye nje kwi-Instagram yakhe, u-Alexander Revva wachaza amava akhe okuxhamla kwisihlwele ukusuka kwinqanaba:
Izolo ekhonsathini yam e-Kaluga Ndabona iphupha lam elidala - ndawela emanzini olwandle, wangena elwandle lwezandla, wangena echibini lokumamatheka ... Kwakungenakulibaleka !!! Kwakunzima kakhulu!
Nangona kunjalo, iimvakalelo ezinomdla azizange zihlale ixesha elide. Abafaki, kwaye ngakumbi abalandeli, benomdla onjalo unamathele kwisithixo, okubonakala ngathi, wamgxotha ixesha elide kwizinto ezinjalo. Ukujonga ngevidiyo, emva kokufika ngokuphumelelayo ezandleni zamalandeli, u-Alexander Revva wayeka ukulawula imeko. Amakhulu ezandla eza kufumana isithixo, enethemba lokumthinta, kwaye, mhlawumbi, ukukrazula ingqungquthela yeememori kwi-stellar body.
Ekugqibeleni, ngommangaliso othile, u-Revwe wakwazi ukuphepha. Sekudala kwi-microblogging yakhe umculi wabiza ukuba ulahlekelwe ngumnwe wakhe omncinci kwisihlwele:
... Kodwa ke yaqala ..., kude kube ngoku umnwe omnene esandleni sakhe akafumananga
Njengoko kwavela kwiingxoxo, ngaphezu komnwe omnene, ababukeli baseKaluga bashiya iinkwenkwezi zabo kwimemori yabo. Yaye isithuba sabo asikaziwa:
shakirrov_v uArthur Pirozhkov siyabonga ngenxa yekhonsathi kwakuyinto epholile xa izicathulo zithatyathwa zibulela kwi ntliziyo zibuye kwakhona
_kati_an__ uTyuflu wabuya ?!
mariettsey28 kwaye umnwe omncinci, kwakhona, awubuyiswa?.
venechka1103 uKaluga waphawula, ukunyaniseka, kunye neentloni ngokuziphatha kwabantu baseKaluzhan. UAlexandre Ndiyathemba ukuba uza kubuya umnwe wakho mncinane
mrs.semenovayulia Ngandlela-thile nokuba neentloni kubahlali babo ... Kodwa, sinethemba lokuba uAvito akayi kuthenga
Umyeni owayesakuba ngu-Anna Sedokova waba ngumntu ongenamakhaya, umfanekiso
USvatlana Khodchenkova noGeorgy Petrishin bahlula iindlela
UVladimir Friske wamangalela u-Olga Orlov we-PR egameni likaJeanne
U-Natalia Friske waphendula ngokukhawuleza kubagxeki nge-Instagram
Umyeni ka-Xenia Borodina wayehlekwa ngumfanekiso ongaqhelekanga
Ukuhlanjululwa kwesibindi ngendlela kaMalakhov
Inzuzo kunye nokulimala kwezilwanyana
I-Vitamin Drink Fruit of Passion
Ukutshitshisa i-esophagus. Iibhokhwe kubantwana
I-Postcard ngoNyaka omtsha 2018 ngezandla zakho: Inja ibonakalisa i-2018 kunye nabantwana ngokunyathela ngamanyathelo ukusuka kwiphepha nekhadibhodi
Iholide nge Starlight
Isobho semifuno yaseFrankfurt
Abafaki bakaDmitry Khvorostovsky abakwazi ukukholelwa ekufeni kwakhe
Isondo ngexesha lokuya esikhathini, kuyingozi okanye akunjalo?
Ukulala emva konyaka
Ziziphi iigama elibizwa ngabantwana bethu?
Inja ehambayo ne lobster